ဗိမာန်နန်းမြင့် ပျော်စံတင့် လင့်ခါနှစ်လည် မေ့နိုင်ပြီ
၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ဝမ်းနည်းပူဆွေးသောက ရောက်ခဲ့ကြရသော နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်ခန့်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည် မသမာသူ လူတစ်စု၏ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေသည်။ ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ သခင်မြ၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ မန်းဘခိုင်၊ ဦးဘဝင်း၊ အဗ္ဗဒူရာဇတ် (ဦးရာဇတ်)၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စဝ်စံထွန်း၊ ဦးအုန်းမောင်နှင့် ဦးရာဇတ်၏ သက်တော်စောင့် ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းနေစဉ် ကာလအတွင်း ယခုလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့ခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်ပင် နစ်နာလှသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကို အစဉ်အမှတ်ရနေရန် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ကို အာဇာနည်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် တစ်နှစ်အကြာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဌာနမှ တံဆိပ်ခေါင်း တစ်ဆယ့်နှစ်လုံးပါ တံဆိပ်ခေါင်းအစုံကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးခဲ့ကြသောနေ့ကို ပြန်လည်သတိရကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းများ အားလုံးကို ဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ထုတ်ဝေပြီး အရောင်နှင့် တန်ဖိုးများ မတူညီကြပေ။ ဒီဇိုင်းပုံမှာ ပြည်ထောင်စု ပါလီမန်အဆောက်အအုံပုံကို အလယ်တွင်ထား၍ မြန်မာမှုဒီဇိုင်းပုံများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။ အဆောက်အအုံရှေ့ အလံတိုင်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်တစ်ဝက် လွှင့်ထူထားသည်။ အဆောက်အအုံအောက်ခြေ၌ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးခဲ့သည့် နေ့ရက်ကို ရေးသားထားသည်။ ၁၃၀၉ ခုနှစ် ဝါခေါင်လဆန်း ၂ ရက် 19th JULY 1947 ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ‘ဗိမာန်နန်းမြင့် ပျော်စံတင့် လင့်ခါ နှစ်လည်မေ့နိုင်ပြီ’ ဟူသော စာချိုးပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်မြေပုံကို အပေါ်ဘက် အလည်တည့်တည့်တွင် ဆွဲသားထား၍ ထိုင်လျက်ရှိသော ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်ပုံနှင့် အောက်ဘက်တွင် အလှဆင်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းပုံမှာ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံ မျှတ၍ ရှုချင်စဖွယ် ဖြစ်သည်။ အပေါ်ဘက် လက်ယာ၊ လက်ဝဲထောင့်များတွင် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုးကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပြီး အောက်ဘက်တွင်မူ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် UNION OF BURMA ဟူ၍ ဖော်ပြပါရှိသည်။
တံဆိပ်ခေါင်းများ၏ အရွယ်အစားမှာ အနံ ၄၃ မီလီမီတာ၊ အလျား ၂၀ မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။ 14 x 13½ perforation (ခွေးသွားစိပ်များ) ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးများမှာ ၃ ပိုင် (အပြာဖျော့)၊ ၆ ပိုင် (အစိမ်း)၊ ၉ ပိုင် (အနီဖျော့)၊ ၁ ပဲ (ခရမ်း)၊ ၂ ပဲ (အပြာ)၊ ၃ ပဲ ၆ ပိုင် (အစိမ်း)၊ ၄ ပဲ (အညို)၊ ၈ ပဲ (အနီ)၊ ၁၂ ပဲ (ခရမ်း)၊ ၁ ရူပီး (ပြာ-စိမ်း)၊ ၂ ရူပီး (အပြာ) နှင့် ၅ ရူပီး (ခရမ်းညို) တို့ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ခေါင်း တစ်ချပ်လျှင် ၁၂၈ လုံးပါသည်၊ ထိုတံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဝေရောင်းချမှုနှင့် အသုံးပြုမှုကို ၁၉၅၀ ဇွန် ၁၀ တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
တံဆိပ်ခေါင်း ဒီဇိုင်းပေါ်၌ သိသာသော အမှားအယွင်းများ ပါရှိသည်။ ထိုအမှားအယွင်းများကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဦးသိန်းအောင်မှ လေ့လာမှတ်တမ်းတင်၍ ဗမာ့ဥဒေါင်း မြန်မာတံဆိပ်ခေါင်းလေ့လာမှု ဂျာနယ်တွင် တင်ပြခဲ့သည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော တံဆိပ်ခေါင်း ဒီဇိုင်းပါ စာသားများ၌ စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်းများ၊ မြန်မာအက္ခရာတွင် မရှိသော စာလုံးများ ပါဝင်လာသည်။ အမှားအယွင်း ခုနစ်မျိုး တွေ့ရသည်။ ဆရာဦးသိန်းအောင်၏ အဆိုအရ တံဆိပ်ခေါင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူမှာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရာ မူလဒီဇိုင်းတွင် မမှားယွင်းနိုင်ဟု ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းပုံနှိပ်ရန် ပလိတ်ပြား၌ စာလုံးဖော်သူသည် မြန်မာလူမျိုး မဖြစ်တန်ရာ။ ဒီဇိုင်းပုံ၌ စာလုံးများ အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း အဆိုပါ အမှားများ ပါခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဤတံဆိပ်ခေါင်းများကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Thomas De La Rue & Co., Ltd.၌ Recess နည်းဖြင့် ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာတံဆိပ်ခေါင်း လောကတွင် ထင်ရှားသူ N.K.D. Naigamwalla ၏ ပထမနေ့ထုတ်စာအိတ် (First Day Cover) မှာ အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံပြီး ထင်ရှားသည်။ Naigamwalla သည် မြန်မာတံဆိပ် ခေါင်းလောကအတွက် ပထမနေ့ထုတ် စာအိတ်များစွာ ထားခဲ့နိုင်သည်။ ၎င်း၏ စာအိတ်၌ အာဇာနည်နေ့ကို သရုပ်ဖော်ရာတွင် အာဇာနည်ကြီးများ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ မြန်မာမှု ကနုတ်ပန်းချီများ၊ တိုင်တစ်ဝက် လွှင့်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံအလံများ၊ လွမ်းသူ့ပန်းခွေများ ပါရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဦးအုန်းမောင်နှင့် ရဲဘော်ကိုထွေးတို့၏ ဓာတ်ပုံများ မပါဝင်ချေ။ ထို့ပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ‘ချစ်သောဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွ ကျဆုံးခဲ့သူများ အားလုံးသည် ဗမာပြည်ကြီး၏ နှလုံးသားထဲတွင် ထာဝစဉ် ရှင်သန်နေမည် ဖြစ်သည်’ ဟု ရေးသားထားသည်။
ထိုတံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်ဝေမှုမှာ အာဇာနည်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လေသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ဝေခြင်း မရှိတော့ပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို အသက်ပေး ရယူပေးခဲ့သည့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ကျေးဇူးတရားများကို ထာဝစဉ် သတိရနေစေရန်၊ ထိုကျေးဇူးတရားများကို လူငယ်တို့ အမှတ်ရနေစေရန် အာဇာနည်နေ့ တံဆိပ်ခေါင်းများ ပြန်လည်ထုတ်ဝေသင့်ပေသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်သည် နှစ် ၇၀ ပြည့် အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ရာ တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်ဝေရန် အချိန်ကောင်း ဖြစ်ပေသည်။
ပြန်လည်ထုတ်ဝေမည် ဆိုပါက အာဇာနည်ကြီးများ၏ ရုပ်ပုံလွှာများ၊ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ အာဇာနည်ဗိမာန်ပုံ၊ အတွင်းဝန်ရုံးပုံနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက် စသည်ဖြင့် အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသော ပုံရိပ်များ ပါဝင်သင့်ပေသည်။ ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ကလေးပန်းချီ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြီး ဆုရပန်းချီကားများကို တံဆိပ်ခေါင်းဒီဇိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုလျှင်လည်း သင့်တင့်လျောက်ပတ်လှသည်။ ထိုသို့သော တံဆိပ်ခေါင်းများ ပြန်လည်ထုတ်ဝေနိုင်ပါက တံဆိပ်ခေါင်း ဝါသနာရှင်များနှင့် ပြည်သူအများ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ဖြစ်ကြမည်မှာ သေချာလှပေသည်။
ကျော်မြင့်မောင်၊ မြန်မာတံဆိပ်ခေါင်း ဝါသနာရှင်လက်စွဲ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
Thein Aung, “Design error of the 1948 Martyr’s Memorial Issue”, The Burma
Peacock, Vol 8, No 3, Fall 1986, p 48-50.
အခွန်တံဆိပ် မကပ်သည့် အထူးကုန်စည်များ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းမည်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တံဆိပ်ခေါင်း မကပ်သည့် စားသောက်ဆိုင် ၄၄ ဆိုင်ကို ဒဏ်ရိုက်